के होला यस्तो ?
स्वस्थानी अध्याए: ३
विहान टेलिफोन को घण्टी वज्यो । उता वाट हतारिएको स्वरमा भन्दै थियो 'गिरिजा त गयो नि'' । म छक्क परे के भएछ त यता उता सवै अनलाइन समाचार हर्ेन भ्याई कतै केहि देखिन ।एका विहानै आएको त्यो टेलिफोन समाचारले दिन भरी सतायो । के गिरिजा साच्चै गएको हो त ? And here is the rest of it. नेपाल फोन गर्न कोसिस गरेको मरे भएन ।कति विजी रहेछ भने आफनो फोन को विल वढेको वढै नेपाल लाइन पाउन भने कत्रो मुस्किल । वल्लवल्ल फोन लाग्यो मैले सोध्न नपाइ उतावाट उत्तर आइ हाल्यो गएको छैन जानेवालामा छ । केहीवेरमा पत्रकारलाई भेट गर्न दिने भनेको छ तेसपछि इमेल गरौला भन्ने खवर पाए पछि केही ढुक्क त भइयो तर हल्लै हल्लाको देशवाट कस्तो हल्ला आउने हो भनि सोचि वसे ।
इमेल नआउन्जेल मेरो दिमागमा अनेकन कुरा खेल्न थाल्यो । तेसको सम्पुण निष्कर्षथियो फेरी सैविधान सभाको चुनाव रोकिन्छ । के नेपालीले यही नियती भोग्न पर्ने हो । कति तरलतामा वढेको छ देश सानो जस्तो लाग्ने समाचारले ठुलो हुरीको संकेत गर्दैछ । हुन त राजा मरेर राज्य रोकिदैन भन्छन तर अहिलेको अवस्थामा गिरिजा पछि को त सोच्न वाध्य भए । विना मंत्रालय पाएकी सुजाता देखि १५ हजार नेपाली सम्म वलि चढाएका प्रचण्ड सम्मको परिकल्पना गरियो । तर को यसपछि मेरो वुद्धिले भ्याएसम्मको जोड गर्दा पनि कुनै उत्तर पाउन सकिन । मैले देखेको केही सम्भावना मध्ये
केहीलाइ अरुले अगाडी आउन दिने छैन । अरुको त कुरै छोडौ जति तन्काए पनि घुमाएपनि गाली गरेपनि जे भएता पनि ७ दलको सम्वन्ध गिरिजा रहनु ज्याल सम्म मात्र हो । किनकी हरेकलाई त्यो पद चाहेको छ । तर एकले अर्कोलाई पत्याउने वातावरण छैन ।पत्याइ हाले पनि नेपालका ३ देश भारत अमेरिका र चाइना कार्ड खेल्नु पर्ने होला ।कसलाई पत्याउने उनिहरुले ? अनि तेस पछि को स्थिताी के त ?
भने पछि नेपालको जनताले कहिले शुख पाउने भएनन । माउवादीले प्रहरी चौकी कव्जा गर्थे सटटामा मंगोलियन कान्त्तिकारीहरु पैदा भइ सकेछन । मुस्लिम देशमा धाटी रेटेर मारेको सुनिज्थ्यो त्यो पनि शुरु भइ हाल्यो । कमाइ भने तल झरदैछ । व्यक्तिगत फर्ुर्ति दिनै पर्ने तेलको भाउले एक न एकदिन आकास छुइ हाल्छ । आपर्ुर्ती मन्त्रीले संविधान सभाको चुनाव सम्म भनेको छन तेस पछि निस्चित छ भाउ वढनेनै छ ।
तर धन्य इमेलमा गिरिजाको फोटो सहितको खवर आए पछि एक दुइदिन भएपनि म केही ढुकक भएको छु । नत्र कोतर्पको तयारीमा जुटेका जंगवहादुरले राजनिती त्यागेका वुद्धको मान्यतालाई किन स्वीकार गर्थे र ?
मान्छेको मरणको कामना गर्ने मान्छे हुन सक्दैन। शत्रुको पनि म्रित्यु पुकार जायज मान्न सकिन्न। बिभिन्न वेबसाइट खास गरेर साझा डट कम मा गिरिजा मरेको खुशी पस्केको समाचार पढें। लाग्छ, हामी अब मानबीय गुण तल्लो स्तरमा पुगिसके छ। गिरिजा संग बिमती हुन सक्छ, गिरिजा प्रति एलर्जि हुन् सक्छ, तर कसैको म्रित्युमा खुस्शी नाच्ने हरुले आफै सोच्नु पर्ने हो, ठिक हो कि बेठिक हो भनेर। लाग्छ, देशको उंधो गति नेताको कारण होइन कि हाम्रै बिक्रित सोच को परिणति हो कि?
साच्चै ती बैतर्नी जान लागेका गिरिजा यता उता भए के हुने होला? जिउदैमा यस्तो हाल छ मरे पछि के होला? पक्का गिद्दै चाल हुन्छ।
हल्ला चाही किन ल्याएका हुन गज्जब छ! राहुलदाइले भने जस्तो "गिरिजा संग बिमती हुन सक्छ, गिरिजा प्रति एलर्जि हुन् सक्छ, तर कसैको म्रित्युमा खुस्शी नाच्ने हरुले आफै सोच्नु पर्ने हो, ठिक हो कि बेठिक हो भनेर। लाग्छ, देशको उंधो गति नेताको कारण होइन कि हाम्रै बिक्रित सोच को परिणति हो कि?"। मलाइ पनि त्यस्तै लाग्यो।